Eme njem YHT bidoro na ihe ndị emesara na May 28! A ga-eji tiketi HEPP zụta tiketi | RayHaber | raillynews
[22 / 05 / 2020] Mbupu mmiri ara ehi na mmiri ara ehi mepere China	86 China
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEme njem YHT bidoro na ihe ndị emesara na May 28! A ga-eji ngwa HEPP zụta tiketi
23 / 05 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ticketsmalite tiketi na yht ga-azụta na ntinye ngwa
Onye Minista nke ofgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu: Ahịa nke ụgbọ oloko dị ọkụ ga-amalite n'ụbọchị nke abụọ nke Ramadan. Agbanyeghị, enwere ike zụta tiketi ụgbọ oloko site na ngwa mkpanaka na weebụsaịtị ma ọ bụ toll na-enweghị kọntaktị. A gaghị ere tiketi na mpaghara oku na ụlọ ọrụ. A ga-eji akara HES (Hayat Eve Sığar) nweta akara azụmaahịa site na usoro nchekwa data nke nchekwa data iji nyochaa ọnọdụ nke ndị njem gbasara COVID-19.
Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na ekele mbenata ọrịa ọsọ, usoro ịdị adị ga-ebido, na oge a usoro ga-ebubata ụgbọ njem na-eburu ụzọ.
Minista Karaismailoğlu kwuru na ọnụ ụzọ mgbochi na mgbochi nke amachibidoro ịgbasa ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ nwere ọtụtụ mmetụta mmekọrịta ọha na eze na oge a, Gọọmentị mere ihe dị mkpa iji luso nje ahụ ọgụ.
N’okpuru nkea, site n’omume ndị ahụ, e nwewo ọganihu dị ukwuu iji lụsoo nje ahụ ọgụ nakwa na e mewo ihe maka ọtụtụ akụkụ iji belata mmetụta mmekọrịta nke ọrịa na-akpata, Minista Karaismailoğlu ga-amalitekwa usoro nhazi nke ndụ site na mbelata nke ọrịa ngwa ngwa; N'oge a, o kwuru na usoro iwu ga - ebugharị ebugharị n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ga - amalite ma rụọkwa usoro a yana usoro ndị a.
"A ga-ere tiketi na 50% ikike kwesịrị ekwesị maka ọpụpụ mmekọrịta mmadụ na obe site na isi n'oche" pụta.
Minista Karaismailoğlu chetaara na usoro obodo dịka Marmaray na Başkentray akwụsịghị ụgbọ elu ndị a na usoro a wee gbakwunye na a ga-eji nwayọ belata ọnụ ọgụgụ njem. N'ịkọwa na ha amalitela nkwadebe maka njem njem n'okporo ụzọ ụgbọ oloko na nke elu, Karaismailoğlu kwuru sị, "Ire tiketi maka ụgbọ oloko dị oke ọkụ ga-amalite n'ụbọchị nke abụọ nke Ramadan. Agbanyeghị, enwere ike zụta tiketi ụgbọ oloko site na ngwa mkpanaka na weebụsaịtị ma ọ bụ toll na-enweghị kọntaktị. A gaghị ere tiketi na mpaghara oku na ụlọ ọrụ. A ga-eji koodu HES (Hayat Eve Sığar) nweta tiketi dị na ya site na data nchekwa data nke Ministry of Health iji nyochaa ọnọdụ ndị njem banyere COVID-19. "Agaghị ere ndị na-ahụ maka ndị isi ahụike gwụrụ ma ọ bụ ndị enweghị ike ịnweta koodu HEPP." Minista Karaismailoğlu, onye kwupụtara na ha ga-ebupute ụgbọ elu YHT na May 28 site na ị payinga ntị na iwu anya na mmekọrịta dịpụrụ adịpụ, kwuru na a ga-eme ihe ndị ahụ maka ọdịiche mmekọrịta n'etiti ụgbọ oloko na nke mbụ, na a ga-erekwa tiketi ndị njem ụgbọ elu na ikike pasent 50 n'ụzọ kwekọrọ na anya ndị na-elekọta mmadụ na a ga-erekwa tiketi na ntinye aka na ntanetị site na isi oche. o gosipụtara.
'' Tragbọ oloko dị elu ga-eme ngụkọta nke njem iri na isii n'ụbọchị ''
N'ihi mmachi nke ụzọ njem dị n'etiti ihe ize ndụ nke COVID-19, YHT gbochiri ụgbọ elu ya na mpụga Marmaray na Başkentray ruo Machị 28, 2020, na-egosi na ọ bụ naanị ụgbọ elu YHT ga-ebido n’ọdụ ụgbọ oloko isi na mpaghara ga-ebido dịka Mee 28, 2020. Site na 28, ọ ga-eme ngụkọta nke ụgbọ elu 2020 kwa ụbọchị na Ankara-Istanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Istanbul. ” Minista Karaismailoğlu kwukwara na a ga-eme mkpọsa ịdọ aka ná ntị ugboro ugboro iji chekwaa ohere nke ụgbọ oloko.
A ga-etinye iwu ọhụrụ na YHTs
Iwu ụfọdụ ga - etinye na "oge mgbanwe". Ndị a bụ ndị a:
Ndị ọrụ YHT ga-ebugharị ndị njem nwere ikike pasent 50.
Agaghị ebugharị ndị njem ụgbọ oloko na ụgbọ oloko. Ndị njem ga-eji akwa ha.
Ndị njem ga-enweta tiketi tupu ha eruo. Ọ ga-anọdụ naanị n’oche ha zụtara. Ọ gaghị enwe ike ịga oche ọzọ.
Enweghị mgbanwe na ọnụ ahịa tiketi.
A ga-ehichapụ ụgbọ oloko.
“Inye Nkwado Njem na Usoro HEPP Dị Mkpa Maka Njem YHT”
Karaismailoğlu kwukwara na oche azụ nke ụgbọ ala nke ọ bụla na YHT ga-edobe iche ndị njem echere na coronavirus n'oge usoro njem. A ga-akagbu njem njem ndị na-enweghị ike itinye akwụkwọ a n'oge nlele ahụ na ego tiketi agaghị akwụghachi. N'ime usoro ahụ site na mbata nke ndị njem na ụgbọ oloko ruo ụgbọ oloko, ndị ọrụ dị mkpa ga-ahụ maka ndị njem ahụ iji mee ka mmekọrịta ha na ndị ọzọ nọ. ” N'ikwu na ụgbọ ala a ka ga na-ehichapụ tupu njem a na mgbe ọ na-aga, Karaismailoğlu kwukwara na ngwa enyemaka mbụ nke ndị nnabata na ụgbọ oloko dị ọkụ ga-enwe mkpuchi ma aka.
Kedu ihe bụ HES Koodu na ka esi enweta ya?
Onye Minista Ahụike, Koca, na-ekwusi ike na enwere ike iji koodu HES mee njem ndị a, yana njikwa koodu HES, nwere njirimara ga-abịa na ngwa mkpanaaka "Hayat Eve Sığar". A ga-atụle ọnọdụ nke ndị njem nọ n'ụgbọ elu ahụ site na koodu HEPP awa 24 tupu ụgbọ elu nke ụlọ ahụ. " Minista Koca kwuru, “Ndị mmadụ n'otu n'otu ga - egosi na ha enweghị ihe ọghọm, na ha adịghị arịa ma ọ bụ na - akpọtụrụ, site na ngwa Hayat Eve Sığar. Anyị ga-ebu ụzọ mee ihe ụgbọ njem dị n'etiti. Ga-enwe ike iji ụgbọ elu na ụgbọ oloko jiri koodu ị ga-enweta site na ngwa ekwentị. ” kwuru.
Gịnị bụ HES Koodu?
Koodu HES bu koodu eji emeputa ya, ihe eji aputa ihe n’abia nke gam akporo “Hayat Eve Sığar”. Dabere na koodu a, a ga-eme nyocha kachasị mkpa ọ ga-ekpebi ma ịnabata onye njem ma ọ bụ na anabataghị ya. Enwere ike iji usoro a banye ụgbọ elu na ụgbọ oloko.
Minista Fahrettin Koca; Ihe mgbakwunye nke koodu HEPP nke emepụtara n’onwe ya abụrụla ihe dị mkpa ka ọ bụ n’abalị 18 Mee 2020. Maka ajụjụ koodu HES, akara paswọọdụ njem (TCKN, Passport wdg), kọntaktị kọntaktị (ma ekwentị ma e-mail ubi) na ụbọchị ọmụmụ ga-abanye n'ụzọ ziri ezi ma zuo ezu dị ka ubi chọrọ.
Ngosipụta ọmịiko: oghere mmeghe nke obere oge nke YHT site na AYGM na mpaghara Pendik YHT sah
A na-emechi mkpịsị Bursarada, a gaghị achọta tiketi ndị otu-eji
Ọrụ Nchịkọta Urla Ferry 18 malitere na May
Ndị nlekọta na-akpachara anya na bọtịnụ Magnetic na Ahịa Ochie
Tiketi maka Ọdụ Ụgbọelu nke atọ
Konya ghọrọ ihe nlere na usoro nke ọ na-ebu na njem ọhaneze
Nkwupụta nke ihe dị nro: Oge oghere nke yht si aygm na ọdụ Pendik YHT sah
Nrụrụ aka na CHP's Atıcı HEPP na ụzọ ụgbọ oloko gbanwere ire ahịa…
Ihe mgbochi eletrik maka ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala amalite
Motaş amalitere ihe eji eme ihe na Summer Public Transportation
Ngwa Sivas Single Ticket Amalite
Etu ị ga -esi nweta koodu HES
Gịnị bụ Koodu HES
Ụgwọ tiketi YHT
Ikike njem njem NYT
Uru nke ụgbọ okporo ígwè
Nkwekorita Noramgic nke Onye isi ala sitere na Soyer ruo Kordon
Diyarkart Mbido na njem Ọmalite amalite